ပြည်သူ့ဆေးရုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြည်သူ့ဆေးရုံ
Posted by thihayarzar on Jan 29, 2013 in Creative Writing | 15 comments
ရေးတော့အမှန် တကယ်တော့ မမှန် … အဲဒါ ပြည့်သူဆေးရုံပါ … နာမည်တော့ ပြောင်းသင့်နေပီ …. ဆေးရုံကို အရင်ကလည်း ရောက်ဖူးတယ် ခဏတဖြုတ်လောက်ပါ … မြင်သမျှစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်နေလို့ မသွားတာ … မစည်ကားသင့်တဲ့နေရာတွေမှာ လာပီးတော့စည်ကားနေပါတယ် .. ဆိုင်ကယ်အပ်တဲ့နေရာမှာဆို ဆိုင်ကယ်တွေ ပြည့်နေတာပဲ …. ဆေးရုံမှာလည်း လူအပြည့် … ရပ်ဝေးက လူနာစောင့်တွေကလည်း ရရာနေရာ ဖျာခင်းပီး အိပ်နေကြတော့တာ .. ဆေးရုံရောက်သွားရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ကျွေးသဖခင် ကျေးဇူးရှင်ကြီး ပိုးထိလို့ ကိုက်လိုက်တဲ့ ပိုးလည်း ပါလာတယ် … ဆေးရုံရောက်တော့ တာဝန်ကျဆရာဝန်က အသင့်မရှိဘူး သွားခေါ်နေရတာ .. မြွေက ဘာမြွေမှန်း မသိဘူး တစ်ယောက်ခေါ်ပြလည်း စမ်းတ၀ါးဝါး နဲ့ မြွေပွေးထင်တာပဲ … နောက်တစ်ယောက်လာလည်း ထင်တာပဲ .. နောက်တစ်ယောက်ကလည်း စပ်ကြား လင်းနဲ့စပ်ထားတာ မြွေပွေးက ဒီလို မဟုတ်ဘူး … စသည့်ဖြင့် မြွေကို ကြည့်ပီး ဆုံးဖြတ်နေတာ .. လူနာကတော့ ကုတင်မှာ ပက်လက် .. သူနာပြုဆရာမက စတင်မေးမြန်းတော့တယ် .. မြွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေက များနေတော့သူမေးတာနဲ့ ကိုယ်ပြောတာ သိပ်မကြားရ အော်ပြောတော့ အဆူခံရတယ် .. တာဝန်ကျဆရာမလေးက ရှင်းပြတယ် တစ်နာရီစောင့်ကြည့် အခြေအနေထူးတယ် အဆိပ်တက်တယ်ဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ် နောက်ကျတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဘာမှ မလုပ်ပေးဘူးလို့ပြောမှာစိုးလို့ ရှင်းပြပေးတာတဲ့ .. လူနာကို ၀ှီးချဲပေါ်တင်ပီး ဖျားနာဆောင်မှာ ထားတယ် … အဖေမြွေကိုက်တယ်ဆိုတော့ အမျိုးတွေက လာကြတယ် အဖေကုတင်ဘေးမှာ ၅ ယောက်လောက်ရှိမယ် စောင်ခင်းတဲ့သူ ပစ္စည်းချနေတဲ့သူ မြွေကြည့်နေတဲ့သူ မေးနေတဲ့သူ နဲ့ပေါ့ .. သူနာပြုဆရာမလေးက အော်တယ်ဗျာ … လူနာစောင့်မှ လွဲလို့ အကုန်အခု ထွက်ပါ .. ရှင်တို့ကုမှာလား ကျွန်မတို့ ကုရမှာလားတဲ့ .. မဖယ်ပေးရင် မကုပေးပါဘူးတဲ့ .. အဖေနားမှာ မြွေကြည့်နေတဲ့ ဦးလေးက ထပီး သူနာပြုဆရာမနဲ့ စကားများပါလေရော .. ဆေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့မယ် အဲကောင်မကို အလုပ်ဖြုတ်ပစ်မယ်ဆိုပီး ဇွက်လုပ်နေလို့ ဆွဲထားရသေးတယ် .. အဖေကိုလည်းစိတ်ပူနေရသေးတယ် … တစ်ညလုံးမြွေကိုက်တဲ့ နေရာကို ရေခဲ ကပ်ထားရပါတယ် .. နှစ်ယောက်ရှိတာ တစ်ယောက်တစ်လှည့်ပေါ့ ….. မြင်သမျှ ရေးချင်ပြောချင်နေတာ ည ၁၂ လောက်ရောက်တော့ မျက်စောင်းထိုးနားလေးက လူနာတစ်ယောက် အသက်ပျောက်သွားတယ် အရက်ဖြတ်လိုက်တာ အဆင်မပြေလို့ ဆေးရုံလာတက်တာ မသေခင် သွေး သုံးလုံးလောက်သွင်းလိုက်ရသေးတယ် …. စမ်းသပ်ပီး ဆေးတွေ ဘာတွေလည်း ထိုးပေါ့ ….. မကြာပါဘူး လူကြီး ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်ဖြစ်နေရင်း ငြိမ်သွားတယ် .. တာဝန်ကျ အကူတစ်ယောက်လာတယ် သူနာပြုတော့ မဟုတ်ဘူးနော် .. စမ်းတောင်စမ်းမသွားဘူး တစ်ခါတည်း စောင်အုပ်ပီး လှည်းပီး ပေါ်ပီး ခေါ်သွားတယ် … သေမှာကို ကြိုသိနေလောက်တယ် .. သေမှာကို ကြိုသိနေတာများ သွေး တွေ အလကားဖြစ်အောင် သွင်းနေသေးတယ် …. တစ်ညလုံးလည်း အိပ်မပျော်ပါဘူး အိပ်လို့လည်း မရဘူး လူနာဆီးပေါက်ရင် စောင့်ပီး ယူရတယ် လူနာဘယ်အချိန်မှာ အစာဘယ်လောက်စားတယ် ရေဘယ်လောက်သောက်တယ် အကုန်မှတ်ရတယ် .. မှတ်စရာမရှိတော့ မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးမှာ ဟိုရေး ဒီရေးနဲ့ မိုးလင်းခဲ့တာ မိုးလင်းတော့ ဆရာဝန်ကြီး လာစစ်တော့မယ် ပြောတော့ လူနာစောင့် ထိုင်ခုံတွေ အပြင်ထုက်ထားရတယ် .. ကုတင်ပေါ်လည်း မထိုင်ရဘူး ထိုင်တာ မြင်ရင် ဒဏ်ငွေ တစ်ထောင် ပေးဆောင်ရမယ်တဲ့ ကုတင်ဘေးမှာ အကြာကြီး ရပ်နေရတယ် ဆရာဝန်ကြီးကလည်း တော်တော်နဲ့မလာဘူး … လာတော့လည်း လူနာနဲ့ မဆိုင်တာတွေ ပြောနေတာ တော်တော် စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ် ပြောချင်နေတာ ပါးစပ်တွေကို ယားနေတာ … လူနာကို စစ်တာနဲ့ ကြည့်တာနည်းနည်း လူနောက်ကနေ လိုက်နေတဲ့ ဆရာဝန် ပေါက်စတွေကို မေးလိုက် ပြောလိုက်နဲ့ တော်တော်နဲ့ ကုတင်မကူးနိုင်သေးဘူး .. နောက်ထပ် အရေးပေါ် လူနာတစ်ယောက် ရောက်လာတယ် လယ်ထဲဆင်းရင် ပိုးထိတာ ပိုးလည်း မမိလိုက်ဘူး ခြေထောက်ကြီးကလည်း မဲပီး ယောင်ကိုင်းနေတာ ဆရာဝန်ကြီးလည်းရှိတယ် သူ့နောက်မှာ ဆရာဝန်ပေါက်စတွေလည်းရှိတယ် အဲဒီလူကို ဂရုမစိုက်ပဲ ဆန်ပြုတ်က ဘယ်လို ကောင်းတဲ့အကြောင်း ဆန်ပြုတ်လှူတာ ဘယ်လို ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာတွေ သူတို့ ငယ်ဘ၀ အတွေ့အကြုံတွေပါ ပြောနေသေးတယ် … လူနာရယ် လူနာရှင်ရယ်မှာတော့ မျက်နှာ တွေမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ အမူအယာတွေ ရှိနေပေမယ့် သူတို့ကတော့ ရယ်လို့ ပြေးထိုးချင်လောက်အောင် ဒေါသတွေ ထွက်နေတာ … မဖြစ်ဘူး ဆက်နေရင် ပြသာနာများတော့မယ် လူလဲမှ အဆင်ပြေမယ်ဆိုပီး လူလဲပီး ဆေးရုံက မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ် …. ဆရာဝန်ကြီး မလာခင် သန့်ရှင်းရေး သမားတွေ လုပ်နေလိုက်တာ အဲဒီအချိန်ပဲ သန့်ရှင်းတယ် ကျန်တဲ့အချိန်ဆို ညစ်ပတ်တယ် … အိမ်သာတွေဆို တက်ချင်စရာတောင် မရှိဘူး ညစ်ပတ်ပီး နံဟောင်နေတာပဲ အိမ်သာနားမှာလည်း ရှုပ်ပွနေတာ ရွံ့တက်တဲ့သူဆို ရောဂါတိုးမှာ နောက်ထပ်ရှိသေးတယ် ပြောလို့လည်း ကုန်မယ်မထင်ဘူး ဒါတောင် တစ်ခေါက်ပဲ ရောက်သေးတာ တစ်ခေါက်တောင် ပြောစရာတွေ ကျန်သေးတယ် တော်ပီ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ဖြတ်လိုက်မယ် ….
သိမ်းထားတာတော့ကြာပါပီ အခုမှ ဂေဇာတ်ထဲ ရောက်ဖြစ်တော့တယ် ရောက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲ ဆက်ရေးပီး တင်လိုက်တာ …. အရေးအသားတော့ သိပ်မတက်ဘူး စိတ်ထဲရှိတာလေး မခံနိုင်လို့ ရေးချလိုက်တာ … ကျွန်တော်တို့ရွာက တိုးတက်လာပီ ဆိုတော့ အရင်လို ပေါ့ပေါ့တန်တန် ရေးလို့မရတော့ဘူး ကုန်ကြမ်းကလည်း မရှိဘူး ကင်မရာကလည်း ပျက်နေတယ် ….. ရွာသူရွာသားများကို သတိတော့ရနေတယ် အခုရောက်ရောက်ချင်းပဲ အားလုံးကို ဂါရ၀ပြုလိုက်ပါတယ် …
အဲဒီလိုဆေးရူံတွေလည်ပါတ်ဖို့.. ဘက်ဂျက်ဘယ်သူပေးမှာလည်း.. ဆိုတဲ့..မေးခွန်း…။
ယူအက်စ်မှာတော့.. ကိုယ့်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ရင် ကုဖို့.. လစဉ်(လစဉ်) အာမခံကိုငွေသွင်းထားရတယ်လေ..။ ကျမ်းမာရေးအာမခံငွေပေါ့..။ ကျမ်းမာရေးကိစ္စဆို.. အဲဒီငွေကို..သုံးတယ်..။
ဟဲလို အယ်ချုပ်. ..
ဆာလုံးဗောင်း တေ မာမား မပြောရင် မပြောသလို …ရေးချင်သလိုကိုရေးနေတော့တာပဲ…
ဇဂါးမစပ် …အင်ဖလူအင်ဇာ နှိပ်စက်လို့ …ကျုပ် လူဂျီးတွေ အကုန် ဆေးရုံရောက်ကုန်ဘီ…
ကျုပ်သာ သေနိုင်ခဲလို့ ဘာမှ မဖစ်တာ … ဆိုတော့
ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်မချိမယ့်တူတူ ရွာထဲ မျက်စိနောက်အောင် သောင်းဂျန်းမယ် ဖြစ်ပါဂျောင်း….
လောလောဆယ်တော့.. တီဗီထဲ.. အာရှသားဗီယက်နမ်တယောက်က.. သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းပြီး.. ဖလူကာကွယ်နည်းသစ်အတွက်.. သုတေသနပြုခံနေတာ..ပြနေလေရဲ့..
အိုဘယ့် ကျမ်းမာရေး ကျန်းမာရေး…ကျန်းမာရေး… ကျန်းမာရေး…
( ဟတ်ချိုးသံကြားလျှင်.. ဘေးလူမှပြုရမည့် အာမေဋိတ်.. )
Read more: http://www.newyorker.com/online/blogs/shouts/2013/01/zero-tolerance-flu-prevention.html#ixzz2JJy2K5Hr
၀ီစကီတပုလင်းနဲ့ စောင်ခြုံကွေးတာ ၃ရက်လောက်…
လစာပြည့်နဲ့ ခွင့်သာရမယ်ဆိုရင် …
ဆေးရုံကတော့မပြောနဲ့ အဖေနှလုံးဖောက်ပြီး မောလာလို့ ဆေးရုံကြီး စနေနေ့ကတင်လိုက်ရတာ…
ဆေးရုံက ဆရာဝန်… လူနာက ၀မ်းသွားတာ မနက်ပိုင်းတင် ငါးခါလောက်၇ှိတာကို သွားပြောတာ… အခြောက်မ စတိုင်နဲ့ ချာကနဲထပြီး လူနာကို သွားအော်တယ် ဘာဖြစ်လို့ ခံစားနေရတာ မပြောတာလဲဆိုပြီး… အိုက် ဂေးဆရာဝန်နဲ့ ကောင်းကောင်း ပွဲကြမ်းပလိုက်တော့ အဖေက သာမီးကို ဆေးရုံကနှင်ထုတ်လိုက်တယ် ပြီးတော့… ဟီး.. အမေတို့ မောင်လေးတို့ ဆက်စောင့်ကျန်နေရစ်တယ်….
Private Hospital တွေကို နဲနဲလန့်နေလို့ ဆေးရုံကြီးလာတာ…
အခန်းခ သောင်းချီမပေးရတာ သာ၇ှိတာပါ… ဆေးဝယ် အီးစီဂျီဆွဲ… အကုန် အိတ်ထဲက တဖြောဖြောထုတ်နေရတာ…
အဆောက်အဦ ရယ် ကုတင်ရယ် ဆရာဝန်၊ဆရာမ ရယ်ပဲ ရှိတဲ့ နေရာပါ
ကျန်တာ ဂွမ်းက စ ကိုယ်တိုင် ၀ယ်ရပါတယ်
အခြေအနေ ပေး ရင် ကိုယ်တွေ့လေး တစ်ပုဒ်လောက်တော့ ရေးချင်ပါသေးတယ်
ရေးချင်တာများ ရေးလိုက်ပါ nozomi ရယ်။
“ဆန်ပြုတ်က ဘယ်လို ကောင်းတဲ့အကြောင်း ဆန်ပြုတ်လှူတာ ဘယ်လို ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာတွေ သူတို့ ငယ်ဘ၀ အတွေ့အကြုံတွေပါ ပြောနေသေးတယ် … လူနာရယ် လူနာရှင်ရယ်မှာတော့ မျက်နှာ တွေမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ အမူအယာတွေ ရှိနေပေမယ့် သူတို့ကတော့ ရယ်လို့”
သူတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စဆိုတော့လဲ သူတို့အတွက်အဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ နှစ်ဖက်
လုံးကကြည့်ရင် အားလုံးမှန်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တောင်အလုပ်လုပ်ရင်းဖုန်းကလေးပြောလိုက် နောက်
စိတ်ပါရင် သီချင်းလေးတောင်ညည်းတပ်ကြတာမလား။ အရမ်းမလွန်ဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့ကိုနားလည်ပေး
အမေနှလုံးကုတာနဲ့……… အဖွားဆေးရုံမှာဆုံးတာနဲ့………. ညီတျောက် အက်စီးဒန့်ကြောင့်
ခြေ၂ချောင်းကျိုးတာနဲ့…. အိုက်ဒါတွေနဲ့ပဲ ဆေးရုံအကြောင်းနောကျေလာတာ ဟီးဟီးး
အပေါက်စောင့်တွေက သောကများနဲ့ လာရှာရတဲ့ လူနာရှင်တွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံတာ….
သန့်စင်ခန်းသွားရင် ပိုက်ဆံပေးရတာ ရှုရူးပေါက်ရင် ဘယ်လောက် အီအီးပါရင်ဘယ်လောက် ရေချိုးရင်ဘယ်လောက် ချိုင့်ပန်းကန်တွေဆေးရင်ဘယ်လောက် အဲ့ဒလိုလေးခွဲကောက်သေးတာ….
နဲနဲအဆင်ပြေတာဆိုလို့ နှလုံးကုသဆောင်ပဲ ချိတယ်တော့်…. (အတင်းပြောလေသံ)
နှလုံးဆောင် ဆိုလို့သတိရသွားတယ်ဗျာ။ ကြာတော့ကြာပါပြီ။ အဖွားဆေးရုံတက်တော့ အဲ့မှာပေါ့ တစ်လလောက် အဲ့မှာအိပ်ခဲ့ရတယ်။ ဆေးရုံအကြောင်းတော့ပြောချင်တော့ပါဘူး။ ကုန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က
ရန်ကုန်ပြည့်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုလူနာသွားမေးခဲ့တယ် အပေါက်က သံတခါးဖွင့်တဲ့သူပါးစပ်က အရက်နံ့လေးက
အထူးကုဆေးရုံတွေမှာတောင် အမေဆေးရုံတက်တုန်းက အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေလုပ်ပုံကို ဆေးရုံယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီး ရေးချင်စိတ်တွေပေါက်သွားသေးတယ်။
လူနာကို ဘေးမှာထားပြီး ဆရာဝန်ကြီးက ဘာဟင်းစားရင် ကောင်းမလဲဆိုတာကို အကြေအလည်ဆွေးနွေးနေတာ ဘေးနားက နာစ့်တွေကလည်း ဆရာကြီးကို မျက်နှာလိုအားရ စားသောက်ဆိုင်က မီနူးကို သွားယူပြီး အကျိတ်အနယ်ဆွေးနွေးကြတယ်။
ရင်ကြပ်ပြီး အားနည်းနေတဲ့ လူနာကို ဘေးနားမှာ အကြာကြီး စောင့်ခိုင်းထားပြီး ရှိတယ်လို့တောင် မထင်ဘူး။
အကြာကြီးစောင့်ရလို့ စိတ်ပျက်နေတဲ့အမေကို စောင့်ခိုင်းတာရော၊
လူနာစမ်းသပ်ရင်း အာလာပသလာပ ပြောနေကြတာ လူနာကို ရောဂါကို တာဝန်ကျေစမ်းသပ်တာကိုရော၊ လက်လွတ်စပယ် လုပ်နေသလို ခံစားမိတယ်။
လူနာနဲ့ လူနာရှင်ကို အသက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရော သတိထားမိကြရဲ့လားမသိဘူး။
အဲဒါ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျုပ်ကတော့ အရင်ဘွ အရင်ဘွဒွေဂ သူတစ်ဘား အသားကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ခဲ့ လေလို့လားဒေါ့မသိ
အရင်ဘွဂ သူတစ်ပါးဆီဂ ပိုက်ဆုံကို လိုတာထက်ပိုမတောင်းခဲ့ စေသနာထက် ငွေအသပြာကို မမက်ခဲ့လို့
ယခုဘွမှာ အနာမျိုး ၁၀၁ ပါးကင်းပြီး ဘယ်ဆေးရုံ ဘယ်ဆေးခန်း မှကိုမရောက်ဖူးလို့ ယခုလို ရေးသားထား
မှုလေးဒွေကို လေ့လာရုံသာဖတ်ရှု့သွားပြီး ဘာမှဝင်ရောက် မဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါဂျောင်းးးးးးးးးးးးးး
နိုင်ငံတော်က ပေးတဲ့လစာတွေ ယူထားပီးတော့ လူနာတွေကိုတော့ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ် .. ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ မအော်ပါနဲ့ မငေါက်ပါနဲ့ ဆေးရုံကို ပိုက်ဆံမရှိလို့ ပြည့်သူဆေးရုံမှာ လာတက်တာပါ သူတို့လေးတွေ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတာ သူနာပြုလေးတွေ ငေါက်လိုက်ရင် မျက်နှာလေးတွေ ငယ်သွားတာကို ကြည့်ပီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် … ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူတွေဆို သူတို့က ပြုံးလို့ … ဓလေ့လားတော့ မသိဘူး သန့်ရှင်းရေးနဲ့ တာဝန်ကျ သူနာပြုကို မုန့်ဖိုးလေး ပေးမှ သူတို့က ပြုံးပြတာ .. ဂရုစိုက်တာ လူအချင်းချင်းစာနာစိတ်မရှိတာပေါ့ဗျာ ငါသာသူ့နေမှာဆိုရင် ဆိုတဲ့စိတ်ကလေး ထားပေးကြည့်လိုက်ပါ … အားလုံးကောင်းသွားပါလိမ့်မယ် ..